Blogger of this week : Dipak Aryal - MeroReport
Blogger of this week : Dipak Aryal
हाल पेप्सिकोला टाउन प्लानिङमा बसोबास गर्ने दिपक अर्यालको पुरानो घर पाल्पा हो । आमसञ्चार र पत्रकारितामा स्नातकोत्तर दिपकले पत्रकारिता अध्यापन पनि गर्दछन् । उनको रुची फोटोग्राफि र ट्रेकिङ हो र नियमित रुपमा फ्लिकरमार्फत फोटोहरु पनि अपलोड गरिरहेका हुन्छन् । mysansar.com मा लेखेर ब्लगिङ शुरु गरेका दीपक नेपालका शुरुवाती ब्लगरहरु मध्येमा पर्दछन् । हाल मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा अनुसन्धाताको रुपमा कार्यरत दिपक यस साताको ब्लगर बन्न सफल भएका छन् ।
सर्वप्रथम मेरिरिपोर्ट साताको ब्लगर बन्नु भएकोमा यहाँलाई बधाइ छ । साताको ब्लगर हुँदा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
धन्यवाद मेरोरिपोर्ट टिमलाई । मलाई एकदमै रमाइलो र खुशी महशुस भइरहेको छ ।
तपाईंले कहिलेदेखि ब्लगिङ सुरु गर्नुभयो ?
मैले ६२ / ६३ सालको आन्दोलनमा उमेश श्रेष्ठको ब्लग मेरो सन्सारमा नियमित रुपमा लेख्ने गर्थेँ । मैले मेरो सन्सारमा करिब डेढ सय जति राजनैतिक विश्लेषणहरु लेखेँ । त्यही क्रममा एक दिन उमेशजीले नै ब्लगिङ गर्न सिकाउनु भयो । सुरुमा palpaonline.com डोमेन नेम लिएर चलाएको थिएँ । तर अहिले चाँही palpatansen.wordpress.com नै चलाई रहेको छु र यसमा ब्लगिङ गर्न थालेको पाँच बर्ष भइ सक्यो ।
ब्लगिङमा मलाई रमाइलो लाग्ने दुइतीन वटा कुरा छन् । मेरो सन्सारमा मैले लेखेको कुनै कुनै लेखहरुमा दुइ सय तीन सय कमेन्ट आउँथ्यो । त्यस्तो अन्तर्कृया अरु आमसञ्चारमा अलि गार्हो नै छ । आफुलाई मन लागेको कुरा लेख्न पाइने, इडिट नहुने, गेटकिपिङ नहुने जस्ता धेरै कुराले ब्लगिङ सजिलो भयो ।
विशेष गरी मैले गहन विषयमा ब्लगिङ गर्छु । धेरै जस्तो सामाजिक विषयबस्तुमा ब्लगिङ गर्ने गर्छु ।
आफ्नो ब्लग तानसेन पाल्पामा तानसेन पाल्पाको मात्रै विषयबस्तु समावेश गर्नु हुन्छ कि अरु पनि गर्नु हुन्छ ?
तानसेन, पाल्पासँग सम्बन्धित जानकारी पाएसम्म राख्छु । यसको साथै अरु विषयवस्तु पनि समावेश गर्ने गर्दछु । मलाई राम्रो लागेको र मेरो आफ्नो बिचारसँग मिल्ने अरुको लेखहरु पनि पोस्ट गर्ने गर्दछु । जस्तो कहिलेकाँही सिके लाल, प्रशान्त झाका लेख र समाजलाई प्रभाव पार्ने अरुको लेख पनि पोस्ट गर्ने गर्दछु । र फोटोहरु पनि समावेश गर्दछु ।
आफ्नो ब्लगको बारेमा बिस्तृत रूपमा बताइदिनुसन ?
मेरो ब्लगमा एतिहासिक डकुमेन्ट छन् । जस्तो बिपी कोईरालाको तत्कालिन लेखहरु, मैले र अरुले लेखेका शैक्षिक लेखहरु समावेश छन् । यसको साथै रिसर्च गरेर लेखिएको लामो आर्टिकल पनि समावेश गरेको छु । आफुले गरेका फोटोग्राफी पनि अपडेट गर्ने गरेको छु । त्यस बाहेक शैक्षिक म्यागजिन र गार्जियन, आउटलुक जस्ता बाहिरका म्यागजिनका लिङ्कहरु पनि राखेको छु ।
पछील्लो पटक कुन बिषयमा के लेख्नुभयो र के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्यो ?
पछिल्लो पटक मैले लेखेको लेख यसकारण शिक्षकले पढ्नै पर्छ भनेर राखेको छु । म अहिले पढाउँछु पनि । विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने होईन शिक्षकले पनि पढ्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले शिक्षकले यस कारणले पनि पढ्नु पर्छ कि बिद्यार्थीहरु न्यु मिडियाको कारणले धेरै सुचना प्राप्त गर्दछन । विद्यार्थीसँग धेरै सुचना हुन्छ, उनीहरुले प्रश्न गर्दा शिक्षक पछाडी परेको जस्तो हुन्छ । त्यसैले शिक्षकले पढ्नुपर्छ भनेर लेखेको हुँ । त्यो लेख मेरो अनुभवको आधारमा लेखेको हुँ ।
बाटोमा हिँड्दा, न्युज पढ्दा जे कुराले मलाई छुन्छ, त्यही बिषयमा लेख्ने गर्छु ।
ट्राफिक ठिकै छ । कहिलेकाँही अलि बढ्ने गर्दछ, अरु बेला प्राय दुइ तीन सय जति हुन्छ । प्रतिकियाको कुरा गर्दा मेरो ब्लग हेरेर केहीले आफ्नो रिसर्च पेपरको लागि बिपीबारेका सामग्रीहरु मागेका छन् र मैले पठाएको पनि छु । मेरो ब्लगमा कमेन्ट भन्दा पनि इमेल हरु आएर यो बिषयमा अरु आर्टिकल छ भने पठाइदिनुस भनेर आउँछ धेरै । कुनै बिशेष लेखलाई कमेन्ट नआउने पनि होइन ।
प्रभाव त अवश्यै पार्छ । नयाँ टेक्नोलोजीले राम्रो वा नराम्रो प्रभाव दुबै पार्छ । यसलाई कसरी सुधार गर्दै लाने भन्ने हो । सकरात्मक प्रभाव पारेका धेरै उदाहरण पनि छन् ।
बढ्नु त राम्रै हो । मटेरिअलहरु नियमित अपडेट हुने, स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो बिचार राख्न पाउनु, लेखहरुमा कमेन्ट गर्न पाउनु प्रजातान्त्रिक हिसाबले राम्रो हो । ब्लगमा पनि स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो बिचार, धारणा राख्न पाउने भएकोले ब्लग सबै भन्दा राम्रो माध्यम हो ।
यो त व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा भयो । मलाई जहिलेसम्म लेख्न मन लाग्छ त्यती बेला सम्म लेखिरहन्छु । सबैले आफ्नो कुरा मिडियामा लान सक्दैनन् । सबैले किताबमा लेख्न सक्दैनन् । त्यसैले सबै भन्दा राम्रो माध्यम त ब्लग नै भयो आफ्नो बिचार, धारणा व्यक्त गर्नको लागि । यसको भविष्य राम्रो छ जस्तो लाग्छ ।
ब्लग भनेको आफ्नो धारणा र अभिव्यक्त व्यक्त गर्न ठाउँ हो। हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन । तपाईंलाई के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ?
त्यसलाई दुई किसिमले हेर्न मिल्छ । एउटा आचारसंहिता लागु गर्दा व्यवस्थित हुन्छ, समाजलाई नकारात्मक प्रभावबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसैले यो जरुरी छ भन्ने हो । तर अचारसंहिता बनाउने कसले? अचारसंहिता बनाउनेले आफ्नो हितको लागि बनाउने गर्दछन । त्यसैले जसले अचारसंहिता बनाए पनि कसको लागि बनाउने भनेर छलफल नै गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
यस्तो प्ल्याटफर्म हुन जरुरी छ । मलाई लागेको कुराहरु व्यक्त गर्नको लागि पत्रिका वा अरु ठाउँ जान सक्दिनँ । मेरो फेसबुक र ब्लग पनि त्यति लोकप्रिय छैन । त्यो कुरा आम मानिसमा जानको लागि अलि चलेको वा धेरैले हेर्ने माध्यम भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसैले मेरोरिपोर्टले सकारात्मक प्रभाव नै पारेको छ ।
यसको सदस्यहरु बढ्दै जान पर्‍यो । बिस्तारै जोडिदै जादैँ पनि छन् । ब्लगर पनि जोडिँदै छन् यो राम्रो कुरा हो । काठमाडौंमा मात्र सिमित नभएर बाहिरको पनि समाचार आउने भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
दिपकको ब्लग लिन्क : http://palpatansen.wordpress.com/
Comment by Deepak Aryal on March 16, 2012 at 9:50pm
Dear Sangeet Sangroula jee, Thanks for your wishes.
Comment by Sangeet Sangroula on March 16, 2012 at 9:22pm
Comment by Deepak Aryal on March 15, 2012 at 3:32pm
Thank You Ajeeta jee and Indra jee.
Comment by Ajeeta Sigdel on March 15, 2012 at 12:55pm
Congratulations Dipak ji.
Comment by Indra Dhoj Kshetri on March 15, 2012 at 12:54pm
Congratulations Deepakji. You're one of the pioneering bloggers in Nepal and your writing as well as photography - both are very powerful. Keep rocking.